बहालवाला न्यायाधीश मिडियामा, अब के होला न्यायलयभित्रको राजनीति ? - Candles Khabar
गृहपृष्ठ बहालवाला न्यायाधीश मिडियामा, अब के होला न्यायलयभित्रको राजनीति ?
न्यायलयभित्रको राजनीति छताछुल्ल हुन थालेको छ । न्यायाधीशहरुको स्वार्थ बाझिएको कुरा आएकै छन् । हुँदा हुँदा बहालवाला न्यायाधीश मिडियामा बोल्न थालेका छन् ।
पछिल्लाे - केपी ओलीले अर्को प्रतिगमनका लागि वार्ताको कार्ड फाले : माधव नेपाल
अघिल्लाे - ओलीका ‘शर्त’ एकताका लागि बाधक